Umsindo PUBG Hack ats Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
umsindo IPUBG kugula
Umsindo wethu PUBG Ukukopela kufanelekile njengayo nayiphi na enye, yiyo loo nto abasebenzisi bexhomekeke kuyo ukubagcina ephezulu kumdlalo wabo.
Ukufumana ukufikelela kummangaliso we-PUBG Rage Hack usebenzisa i-1-Day Product Key
Ngaba ufuna uncedo olungakumbi? Ukufumana ixesha elide ngokuthenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1!
Yiba ngomnye wabasebenzisi beMidlalo ye-Gamepron ejikeleze ngeSitshixo seMveliso yeNyanga enye
Ngawo onke amanqaku amangalisayo esiwapakishe kule PUBG Hack, iyakothusa xa umntu ekugqibeleni elawula ukunikhupha (okuya kuba yinto enqabileyo, khawukhumbule!).
Ulwazi lwePUBG Rage Hack
I-PUBG Rage ibeka amandla ezandleni zakho ngokudityaniswa komthungo kwazo zonke izinto ezisetyenziswa kakhulu zePUBG. Akukho litye lishiyekileyo lingaguqulwanga xa kuziwa kwesi sixhobo, yiyo loo nto uninzi lwabasebenzisi beGamepron sele beqhelene nalo. Zonke izixhobo zinemvakalelo eyahlukileyo, kwaye iPUBG Rage Hack ayifani! Iindaba ezimnandi zezokuba obu buqhetseba bulungile kanye njengayo nayiphi na enye onokuyifumana kwiGamepron, ukuyenza ifaneleke nakubani na ofuna ukufumana umda ngelixa edlala iPUBG.
I-PUBG inzima ngokwaneleyo njengoko injalo, kutheni ungazenzi lula izinto? I-PUBG Rage Hack ifaka izinto ezithandwayo ze-Enemy ESP (Ibhokisi kunye nethambo), uLwazi lweTshaba, i-Item ESP, i-Aimbot, i-2D Radar, nangaphezulu! Zonke izinto zakho ozithandayo zifakiwe ngaphakathi, kunye neempawu ezongezelelweyo ngaphezulu.
Injongo yokuJongwa kwezithuthi
Injongo yoTshaba ilumkisa
Umdlali ujonge kuwe
Malunga nePUBG Rage
Ungasebenzisa i-PUBG Rage Hack ukunyanga iintshaba zakho njengee-pawns kwibhodi yechess. Ngokujolisa okungagungqiyo kunye nokuBekwa phambili kwamathambo, akukho thuba lokuba uphoswe nakuphi na ukudubula kwakho - ukungena kwimipu kuya kuba kukubaleka okuphumlayo ngoku! Sele uyazi ukuba uza kuphumelela xa iPUBG Rage Hack inikwe amandla, ngakumbi xa ucinga iRadar ye2D kunye neAimbot ukuze basebenze kunye ngaphandle komthungo. Zifunxe iintshaba zakho ngeRadar emva koko uzidubule phantsi ngokungxama! Ukutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo kukwakho xa uphuma kwi-ammo, kunye nokuKhangela okuBonakalayo kunye neMowudi yokulwa.
Kutheni usebenzisa iPUBG Rage ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Usebenza nzima kwimali yakho, kutheni uzikhathaza ngokuchitha imali kwi-PUBG Hacks? Ungasoloko uthenga iihacks ezithembekileyo nezikumgangatho ophezulu apha kwiGamepron, yiyo loo nto kufuneka usoloko ujonga nathi ngaphambi kokujonga kwenye indawo. Sinemigangatho ephezulu kakhulu yokuyibamba ngaphambi kokuba naziphi na izixhobo zethu zinokukhutshwa, ke sele uyazi ukuba ufumana imveliso elungileyo-xa uthenga nge Gamepron, ukufumana eyona PUBG Hacks sisiqinisekiso! Umdlalo unokukhathaza ngokwaneleyo, ke ukujongana nokusilela kwe-PUBG Cheat ekunzima ukusebenza nayo kuya kwenza izinto zibe mandundu.
Imenyu yomdlalo wayo nayiphi na into enikiweyo ibaluleke kakhulu, ngaphandle kokuba abanye bacinga ntoni. Ukuba isikrini sakho sigcwele i-junk usenokuba nakho ukuphumelela, kodwa ngaba uyonwaba? Sinikezela ngemenyu emnandi yomdlalo weqonga eyenza ukuba kuguqulwe iinketho ezithile zokukhangela (kunye nokucima!) Umoya. Ukuguqula yindlela ebalulekileyo yokuqhekeza, njengoko kuya kubakho amaxesha apho kuya kufuneka udlale usisidenge kwaye uphume umsulwa. Ukuba ujonga eyona menyu ingcono yomdlalo, i-Gamepron izakuhambisa lonke ixesha.
Ukukopela ngendlela ekrelekrele kwaye uthenge iPUBG yakho yeHack apha kwiGamepron!
Hayi, awungekhe ushukume ngokukhohlisa kwaye kuya kubonakala kubabukeli.
Ngelixa abadlali abatsha besokola ukuqonda umdlalo kunye nabanamava kulawulo oluphezulu, ungangena kumdlalo okokuqala ngokuzithemba usebenzisa iRage PUBG Cheat.
Ngaba ukulungele ukuziva ukuba kunjani ukuphumelela ngotshintsho?
Ilindelwe Lawula NgePUBG Rage Hack yethu?